ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: March 2013
NLD ပါတီဝင်တစ်ဦးက လ၀က ၏ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆို
မတ်လ 27 ရက်နေ့က သံတွဲခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးတွင် ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးတွင် NLD ပါတီဝင် ဘင်္ဂလီတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦး-----------က လ၀ကတွင်ရေးသားသားသည့် ''မြေမြို၍ လူမျိုးမပျောက် လူမြိုမှ လူမျိုးပျောက်မည်" ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ကို ဖျက်ပယ် ပေးရန် တရားဝင် တောင်းဆို လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံတွဲ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ မည်သို့မျှ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကိစ္စဖြစ်သဖြင့် ဖျက်၍ မရနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမြို၍ လူမျိုးပျောက်မည်ကို စိုးရိမ်ရသော အနေအထားတွင် ရှိသဖြင့် ပိုမိုပြီး သတိထားရမည့် အချိန်တွင် ထိုသို့ ပြောဆို လာခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အချာ အာဏာကို ဖျက်ဆီးရာ ရောက်ကြောင်းနှင့် ထို ဆောင်ပုဒ်သည် ပြဿနာ မဖြစ်ခင် ကတည်းက ရှိနေပြီးသား ဖြစ်သဖြင့် မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ထိုသို့ ပြု လုပ်ရသည်ကို လေ့လာရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ယင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ သူများက ပြောပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးသို့ ပါတီပေါင်းစုံမှ ပါတီဝင်များနှင့် ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့မိမြို့ဖ များနှင့် ဌာန ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရ ပါသည်။
၂၀၁၅ မှာ ရွေရောင်လွှမ်းတဲ့ မြန်မာပြည်ဖြစ်ဖို့ ပြည်သူတွေဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ဒီနေ့ မြို့ထဲ ရပ်ထဲ ရွာထဲကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရင် လူတွေရဲ့ပါစပ်ဖျားမှာ ပြောနေကြတာက ဒီချုပ် ဒီချုပ် ဒီချုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါ၊ ဒီစကားလုံးက တော်တော်လေး ရေပန်းစားနေတာ ကို တွေ့ကြရ မှာပါ ။ ပြီးတော့ ရပ်တိုင်း ရွာတိုင်းမှာ NLD ပါတီဝင်တွေရဲ့ အစည်းဝေးတွေ ပလူပျံနေအောင် လုပ်နေကြ တာပေါ့။ ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် NLD ပါတီအနေနဲ့ လူထု အပေါ်မှာ စည်းရုံးရေး အတော်လေးရနေပြီလို့ပြောရင် လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေ အတိုင်း ဆက်သွား မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ၂၀၁၅ ဟာ အင်မတန် ရင်လေး စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မေးစရာ တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ NLD ပါတီ အခုလို စည်းရုံးရေး ကောင်းလို့ ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုရလို့ ၂၀၁၅ မှာ NLD ပါတီ အနိုင်ရသွားခဲ့ရင် မြန်မာပြည် အတွက် အကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောတာလားလို့ မေးမှာ မုချမလွဲပါဘဲ။ မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော့် အမြင်အတွေးအရတော့ ဒီလိုဘဲ ရဲရဲကြီး ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ NLD ပါတီကို မုန်းလို့လဲမဟုတ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို မုန်းလို့လဲမဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကို ခေါင်းဆောင်သော Leader များ Decision Maker များဟာ အရည်အချင်းရှိပြီး ထက်မြတ်တဲ့ သူများပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်မှသာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လှပတဲ့ ရွေရောင် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ရဲရဲကြီး ယုံကြည်တဲ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့ အတွေးသစ် အမြင်သစ်တွေကို ချစ်လှစွာသော မြန်မာပြည်သူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
၁။ အိမ်ထောင်စုတစ်ခု မိသားစုတစ်ခုမှာ မိဘအုပ်ထိန်းသူဟာ အခရာကျပါတယ်။ မိဘအုပ်ထိန်းသူရဲ့ ဆိုဆုံးမမှု၊ ပဲ့ပြင်မှုတွေက သားသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ နေမှု ၊ထိုင်မှု စတာတွေနဲ့ အနာဂတ်တွေ လှပအောင် ဖန်တီး ပေးနိုင်ပါတယ်။ မိဘက အရည်အချင်း ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် မိဘကောင်းဖြစ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘဲ ထက်မြတ်ပြီး တော်တဲ့ မိဘဖြစ်ဖို့ပါ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒီလိုပါဘဲ မြန်မာပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ မိဘတွေလို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနေ့ Direction ဖြစ်တဲ့ Democracy လမ်းကြောင်းပေါ်က မြန်မာပြည်ကို ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုမဲ့ Government အဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Leader တွေဟာ ကောင်းရုံနဲ့တင် မရပါဘူး။ မလုံလောက် ပါဘူး Not enough with good ။ထက်မြတ်တဲ့သူတွေ တော်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သူတာဝန်ယူရတဲ့ နယ်ပယ်မှာ specialist ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါမှာသာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ ခေတ်မီတိုးတက်သော မြန်မာပြည်ဆိုတာ ဖြစ်တည်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ NLDပါတီကို ပြည်သူတွေဘာကြောင့်ထောက်ခံနေတာလဲ ဆိုတာလဲ အကြောင်းအရင်တွေ ရှိပါတယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ဟာ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်နေတဲ့ အချက်ဟာ အဓိက အကြောင်းရင်း တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်စုကြည်ဟာ တော် တဲ့၊ထက်မြတ်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်မှ ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှာလား? ဒီယူဆချက်ဟာ လုံးဝမှားယွင်းသွား ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ တော်တဲ့သူတွေ၊ သူ့ထက်တော်တဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိ နေပါတယ်။ တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းရုံနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ တိုးတက်ပြောင်း လဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ဦး တစ်ယောက် Super Brain ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပါစေ တိုင်းပြည်တစ် ခုကို တစ်ဦးကောင်း၊ တစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ Develop ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ် ကောင်းမွန်ပြီး ထက်မြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက နိုင်ငံ့ ထိပ်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ကို Support လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဟာ အဓိက Key Point ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ NLD ထောက်ခံမှုရနေတဲ့ နောက် အကြောင်းအရင်း တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ မြန် မာပြည် သူတွေဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရဲ့ အောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကာလလောက် နေခဲ့ရတဲ့ အတွက် စနစ်အ ပြောင်းအလဲတစ်ခုကို အင်မတန်လိုချင်နေတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အုပ် ချုပ်ရေးစနစ်မှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ အနောက် အုပ်စုများရဲ့ ဒဏ်ခတ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် စားဝတ်နေရေး၊ လူမှုဘ၀မြင့်မား တိုးတက်ရေး စတာတွေ နိုင်ငံတစ်ကာနဲ့ Compare လုပ်ကြည့်ရင် အများကြီး နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ရတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီစနစ်ကြောင့်ဆိုပြီး အလိုလို နေရင်း အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားကို မုန်းတီးမှုတွေ ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး ဒီလုတွေ၊ ဒီပါတီ ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာ လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် မထောက်ခံဘူး။ NLD ဘာလုပ်လုပ် ဘာဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံမယ် ဆိုတဲ့ အမုန်းတရား စိတ်ဓာတ်တွေ ၀င်နေတဲ့ အချက်ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခု ဖြည့်စွက် ပြောချင်တာ ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အများဆုံး နဲ့ သောင်းကျန်သူ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအများဆုံး နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ် ပါတယ်။ တိုင်းပြည် တစ်ခု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ အဲဒီတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှု ရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတဲ့ အချက်က အဓိကကျတဲ့ အချက် တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းမှု မရှိဘူးဆိုရင် ကြိုက်တဲ့ အစိုးရတက် အဲဒီ တိုင်းပြည်ဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ Develop ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှ မတူတဲ့ သမိုင်းကြောင်း နောက်ခံတွေရှိခဲ့တာက လဲ ချန်လှပ်ထားလို့မရတဲ့ အဓိက အချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
၄။ နောက်ထပ် အကြောင်းအရင်းကြီး တစ်ခုကတော့ NLD ပါတီရဲ့ ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးရေး လုပ်တဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ပါတီဖြစ်တယ် ဆိုတာရယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ ဓာတ်ပုံ၊မိန့်ခွန်း စတာတွေကို အသုံးပြုပြီး စည်းရုံးတဲ့အပြင် အစိုးရ ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်သမျှ ကိစ္စအားလုံးကို Anti လုပ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက် ပုတ်ခတ် ပြောဆိုတဲ့ အလုပ်ကို လက်ကိုင်တုတ်သဖွယ် အသုံးပြုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရေးသာရတာဟာ NLD ကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာဟာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ NLD ပါတီရဲ့ စည်းရုံးရေး အစည်းအဝေးတွေမှာ သွား နားထောင် ကြည့်လိုက်ရင် ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကျေးလက် နေပြည်သူများဖြစ်ပါတယ်။ အတွေးအခေါ် အမျှော်အမြင်နဲ့ ဗဟုသုတ နည်းနေသေးတဲ့ ပြည်သူတွေကို စည်းရုံးတဲ့နေရာမှာ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရရဲ့ ဟာကွက် ပျော့ကွက်တွေကိုသာ ထောက်ရှုပြီး စည်းရုံး ပြောဆိုရင် အဲဒီလူတွေ ကိုကြိုက်ကြပါ တယ်။ထောက်ခံကြတယ်။ ဒါဟာ လူ့သဘောသဘာဝလဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အပြစ်တော့ မဟုတ် ပါဘူး။ ဥပမာတစ်ခုနေနဲ့ ( NLD ပါတီဝင်တစ်ယောက်က လူထုစည်းရုံးရေး လုပ်တဲ့ အစည်းဝေးတစ် ခုမှာပြောလိုက် တယ်။ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကလူတွေက ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက် တုန်းကလူတွေ၊ ဒီလူတွေက ဘောင်းဘီချွတ် အရောင်ပြောင်းထားတဲ့ လူတွေ၊ နဂိုကလည်း ဒီလူတွေ လုပ်ခဲ့လို့ တိုင်းပြည် မတိုးတက်တာ၊ အခုလဲ ဒီလူတွေဘဲ ဆိုတော့ ဘာမှထူးလာမှ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေဘ၀ အရောင်ပြောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ ) ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အောက်က လူတွေက လက်ခုပ်တဗြောင်း ၂ တီးပြီး ထောက်ခံကြတယ်။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရက သိပ်ကောင်း တာဘဲလို့ ဘယ်တော့မှ ပြောပြီးစည်းရုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောဆိုစည်းရုံးမှုတွေရဲ့ အောက်မှာ အမှားအမှန်းကို သေသေချာချာ ကွဲကွဲပြားပြား မပိုင်းခြားဘဲ ဘာမသိညာမသိနဲ့ သူများတွေ လက်ခုပ်တီးလို့ သူများတွေ NLD ကို ထောက်ခံလို့ လိုက်ပြီး ထောက်ခံတဲ့ လူတွေဟာ ၁၀၀ မှာ ၉၅% နှုန်းလောက် ရှိပါတယ်။ အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေက NLD ကို ချစ်လွန်းလို့ အားကိုလွန်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ NLD စည်း ရုံးရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ အစိုးရအပေါ်မှာ အဆိုးမြင်ဝါဒ လက်ကိုင်ထားပြီး ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်တဲ့ အပေါစား စည်းရုံးရေး ၀ါဒမှိုင်းတိုက် စကားလုံးတွေ အောက်မှာ ဟုတ်များ ဟုတ်လေ မလားဆိုပြီး ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ ထောက်ခံနေ မိကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ NLD ပါတီမှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ မေ့လျော့နေတဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက်တစ်ခုရှိနေပါ သေးတယ်။ ဒီနေ့ NLD ပါတီဝင်တွေမှာ အများဆုံး ပါဝင်တဲ့လူတွေက အစိုးရ အပေါ်မှာ တစ်ချိန်လုံး Anti လုပ်လာခဲ့ တဲ့သူတွေနဲ့ ပညာ အရည်အချင်းက အစ နည်းပါတဲ့ သူတွေ အများဆုံး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ (ဥပမာ တစ်ခုပြောပြရရင် ကျွန်တော့်မွေးရပ်မြေ ရွာက NLD ပါတီဝင်တွေကို ရွာရောက် တုန်းလေး လာကြည့်လိုက်တယ်။ ဥက္ကဌက ၄ တန်းမအောင်တဲ့ ဦးဖိုးစိန်၊ သူ့ ကို ကျွန်တော် မေးကြည့်တယ် ဦလေး NLD ပါတီ ဥက္ကဌဆိုတော့ တယ်ဟုတ်ပါလား။ ဘယ်လို ၀င်ဖြစ်သွားပြီး ဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲ မေးကြည့်တော့ ဦးလေလဲ မသိပါဘူး ငါတူရာ၊ တောင်ဘက်ရွာ သွားတော့ ထွန်းမောင်ကြီးက ခေါင်းမှာ အနီရောက် အ၀တ်စီးပြီး ဒီချုပ်အလံ အိမ်ရှေ့မှာထောင် ထားတာကွ လူတွေ တရုံးရုံးနဲ့ NLD ဈေးပွဲတော်တဲ့ဗျ ဟန်ပါပါနဲ့ ဒီကောင်က ဥက္ကဌလုပ်နေတယ် ဆိုတော့ ငါလဲဒီဘက်ရွာမှာ ဥက္ကဌ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပါတီဝင်တာဟေ့၊ ဘာလုပ်ဖို့လဲ ဦးလေးရ လို့မေးတော့ ငါတူနှယ် ဥက္ကဌဆိုတော့ ဟန်ပါပါ နေရတာပေါ့ကွ လူအထင်ကြီးတော နည်းသလားတဲ့ ၊ ဒါဆိုဦးလေး ဘာတာဝန် တွေယူထားလဲ ဆိုတော့ ငါတူနယ် ရွာမယ် ဘုရားပွဲရှိ တိုင်း NLD အတွက်ဆိုပြီး ဈေးရောင်းတော့ အမြတ်ကလေး ဘာလေးလဲရ၊ ငါလဲ ဟန်ပါပါ နေလို့ရတာ ပေါ့ကွတဲ့၊ ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို ဦးလေ Democracy ကိုတော့ သိတယ် မဟုတ်လား ဆိုလား အင်း ငါတူရယ် သိတာပကွ မင်းနှယ် Democracyကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀ယ်ထားပြီးပြီတဲ့ဟ အရင်တုန်း ကတော့ ဒေါ်စုက Democracy လုပ်တာတဲ့ အခုတော့ ၀ယ်ထားပြီးပြီတဲ့ဟ) ဦးဖိုးစိန်က ကျွန်တော့်ကို အဲဒီလို ပြောခဲ့တာပါ ဒါဟာ လက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက်တည်း တော်နေရုံနဲ့ NLD ပါတီက တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်လို့မရပါဘူး။ တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းအောင် ဘယ်သူမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ အဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ တော်တဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ဖို့ အရေး အလွန်ကြီးပါတယ်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLDနိုင်ရင် ပြီးရောဆိုပြီ လာချင်ရာလာ NLD ဆိုပြီး မဲပေးလိုက်တဲ့ ရလာဒ်ဟာ ကြာဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲလေး ဖြစ်ခဲ့လို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ မသိသာခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၁၅ မှာသာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဒီပုံစံတိုင်းဘဲ ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့် ဆိုတာ သေချာမဆုံးဖြတ်ဘဲ ပါတီစွဲ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ ထားပြီး မဲပေးကြ ဦးမယ်ဆိုရင် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ မျော်လင့်ထားတဲ့ ရွေရောင် လွှမ်းတဲ့ မြန်မာပြည် ဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ သုံးသပ် တင်ပြလိုက်ရ ပါတယ်။
Jing Hpaw Land
ပြည်မြို့ NLD နှစ်ခြမ်းကွဲကာ အချင်းချင်းဆန္ဒပြမှု တရားရုံးမှ ကိုင်တွယ်မည်
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၇ ရက် ၆ နာရီခွဲအချိန်တွင် ပြည်မြို့နယ်၊ ဖက်တန်းလမ်းရှိ၊ ဆံတော်ရပ် ကွက်ရှိ၊ ရပ်/ကျေး NLD ပါတီ ရုံးရှေ့မှစတင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ် (၂၅၂)၊ ရွာဘဲရပ်ကွက်ရှိ NLDပါတီရုံးရှေ့သို့NLDပါတီ မှ ဦးကျော်ဆန်းဦးဆောင်၍ကား(၃)စီးဖြင့် သွားရောက် ဆန္ဒ ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပါတီရုံးရှေ့တွင် ဦး ကျော်ဆန်း၊ ဦးမြင့်သိန်း၊ ဦးခင်ဦး၊ ဦးတိုးကြီး၊ ဒေါ်ဖြူဖြူစန်းတို့မှ ဦးဆောင်၍ ““အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်အား လှိုက်လှဲစွာ ထောက်ခံပါသည်။ ဗဟိုညီလာခံ ကြီးအား လှိုက်လှဲစွာထောက်ခံ အပ်ပါသည်”” ““ပြည်မြို့နယ် ညီ လာခံ ကိုယ်စားလှယ်(၃)ဦးအား မမှန်မကန်သည့်အတွက် (လုံးဝ) (လုံးဝ)ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါ သည်””၊ ““မမှန်မကန်သော ပြည်မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးအား မထောက်ခံပါ””၊ ““ဒေါက် တာ ခင်မောင်ဝင်းပါ (၃)ဦးအား ပြည်မြို့နယ်မှ လုံးဝ လက်မခံ နိုင်ပါ””ဟူသော စာတမ်းပါ ဗီနိုင်း ပိုစတာများ၊ ဗီနိုင်းစတွင် ခွပ် ဒေါင်းအစစ်တွေရဲ့ ဆန္ဒဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ““အမျိုးသား ဒီ/ ချုပ် အဖွဲ့ရဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီ လာခံကြီးကို ယုံကြည်မျှော်လင့် ချက်အပြည့်နဲ့ ကြိုဆိုပါ၏။ ပြည် သူတွေက ပိုပြီးတော့ ချစ်ခင်လေး စားယုံကြည်အားထားရသော အမျိုးသားဒီ/ချုပ်အဖွဲ့ဖြစ်ချင် ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအကျိုး အတွက် မရည်စူး၊ ကိုယ်ကျိုး အတွက်ပဲ ရှေ့တန်းတင် လက်ဦး မှုကို အရယူ ပါတီဝင်ဖောင်တွေ ကို လိုသလိုသုံး၊ လူတွေမွေး၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးကို အသုံးချ ကြိုတင်လူရွေးပြီး တာ ၀န်တွေကို လုပ်ကြံယူထားသူ များကို လုံးဝမလိုလားပါ။ မျိုး ချစ်မျက်ကန်းများ မဖြစ်ကြပါစေ နှင့်၊ ကြယ်ဖြူနှင့် ခွပ်ဒေါင်းအစစ် များ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့ နယ်””ဟူသော ဗီနိုင်းများကိုင် ဆောင်ကာ လူအင်အား(၅၀)ဦး ခန့်ဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်၍ ညနေ ၅ နာရီ ၅၀ အချိန်တွင် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအား ဦးဆောင်သူ ဦးကျော်ဆန်း၊ ဦးမြင့်သိန်းတို့အဖွဲ့အား သက် ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ ခွင့်ပြု ချက်မရှိဘဲ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်း ကြောင့် ပြည်အမှတ်(၂)ရဲစခန်း မှူး ရဲအုပ်လှထွန်းမှ တရားလို ပြုလုပ်၍ ဦးဆောင်သူ ဦးကျော် ဆန်း၊ ဦးမြင့်သိန်း၊ ဦးခင်ဦး၊ ဦး တိုးကြီး၊ ဒေါ်ဖြူဖြူစန်းတို့အား (ပ) ၂၀၇၊ ၂၀၁၃ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
From : hot news
NLD ဈေးရောင်း ရန်ပုံငွေ ရှာပွဲ ပြည်သူများ မကျေနပ် ( the hot news )
NLD ဗဟိုအဆင့် အကွဲအပြဲ အစ ကိုယ်စားလှယ် (၄) ဦးအား တာဝန်မှ ရပ်စဲ
မိမိ ပါတီဝင်များအား ထိန်းသိမ်း မနိုင်သည့် ၊ စည်းကမ်းမဲ့သည့် NLD ပါတီ၏ ဗဟိုအဆင့် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအဖြစ် ဒီမိုကရေစီ စနစ်နှင့် မညီညွတ်စွာ အဖြစ်မှန်ကို စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု မပြုပဲ သတင်း အကြားဖြင့် ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ် (၄) ဦး ထုတ်ပယ် လိုက်ကြောင်း NLD က မတ် (၅) ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အတွင်း ညီညွတ်ရေးကို ပြိုကွဲစေသော အပြုအမူ၊ အပြော အဆိုနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်သည်ဟု ခိုင်လုံသော သတင်း ရရှိထား သဖြင့် ယခုလ ၈ ရက်၊ ၉ ရက်နှင့် ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦးအား ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ရပ်စဲ လိုက်ကြောင်း ဒီချုပ်မှ သတင်း ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် မှ ရပ်စဲခံ ရသူများမှာ ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ (ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်) အလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဦးသန့်ဇင် (ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဦးခင်မောင်ရှိန်၊ ဥက္ကဋ္ဌ (ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်)မြောက်ပိုင်း ခရိုင်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဒေါ်မိမိကြီး (ဗဟို ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်) ကောလင်း မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးတို့ ဖြစ်သည်။
NLD ပါတီသည် ညီလာခံများကို ရပ်ကွက် ကျေးရွာ အဆင့်မှ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် အဆင့်ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် ပြသနာများစွာ၊ ပါတီဝင် အချင်းချင်း ဆန္ဒပြမှုပေါင်း များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အခု ဗဟိုအဆင့်တွင်လည်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
နှစ်ကျပ်ခွဲ ကျေးရွာ မီးလင်းရေး ဖြစ်ရပ်မှန်
ခေါင်းစဉ် မဲမဲ ကြီး တွေ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ နေနိုင်အောင်တော့ နေပါတယ်။ နောက်ဆုံး မနေနိုင်တော့လဲ တကယ် ထပြောမိ ပါတယ်ဗျာ။
((( နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာ မီးလင်းရန် ကူညီသည့် ဆရာတော် နှင့် ရွာသားများ ကို ဖမ်းဆီး ))) အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို အရိုးသားဆုံး သုံးသပ်ကြည့်ကြမယ်လေ။
နှစ်ကျပ်ခွဲရွာမှာ ထီးတော်လှုပ်(သို့)ထီးတော်ရှင် စေတီ လို့အမည်ရတဲ့ ထင်ရှားနဲ့ စေတီ တစ်ဆူ ရှိပါတယ်။ နယ်တဝိုက်မှာတော့ ထင်ရှားကျော်ကြားမှု အပြည့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထီးတော်ရှင် စေတီ လျှပ်စစ်မီး ပူဇော်ရေး အတွက် လှူဒါန်းသူ အချို့နဲ့ ဒကာ/ဒကာမ များ စုပေါင်းပြီး ထရန်စမော်မာ တစ်လုံး စုပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပြဿနာက စဖြစ်တော့တာပဲ ဂေါပကအဖွဲ့က ဘုန်းဘုန်း ဦးကောသလ္လကို စေတီပိုင် အလှူငွေ အလွဲသုံးစား လုပ်တယ်လို့ သံသယရှိပြီး ရဲတိုင်မယ်/ တရားရုံး တိုင်မယ် ဖြစ်ကြရော ဒါနဲ့ ရွာနဲ့ ဘုန်းကြီး နည်းနည်း ကွဲလွဲ ကုန်ကျတယ်။ ဂေါပက ဦးမြသန်းက တရားရုံးမှာ ဦးကောသလ္လကို တရားစွဲတယ်။ ဖြစ်ပွားရခြင်း အကြောင်းရင်းက တော့ ဒါပါပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါ တယ်။ နောက်ပိုင်း ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ လတ်တလော အကြောင်းရင်းတွေပါ။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြာ ထရန်စဖော်မာလေး တစ်လုံးနဲ့ ထီးတော်ရှင် စေတီကို မီး ပူဇော်နိုင်တာကို အတော်လေး သာဓုခေါ်ရမှာပါပဲ။
နှစ်ကျပ်ခွဲ ကျေးရွာမှာ အိမ်ထောင်စု (၈၀၀)လောက် ရှိတယ်လေ။ ဘုန်းဘုန်း ဦးကောသလ္လ ရဲ့ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး ဆောင်ရွက်မှုကို ကြည့်ကြ ရအောင်ဗျာ။ ကျောင်းအနီး တဝိုက်က ၀ထ္တုငွေ ကပ်နိုင်တဲ့ ဒကာ/ဒကာမ (၁၄၅)ဦးကို လျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုခွင့် ရအောင် လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန် (၁၇)ဦး လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးဘူး ဆိုပြီး တိုင်စာ ပေးပို့တိုင်တန်း ပါလေရော ဒါနဲ့ တိုင်ရင် ကြောက်ရတဲ့ လျှပ်စစ် ၀န်ကြီးဌာန အနေနဲ့လည်း ၂၀၁၁ ဇွန် လပိုင်း လောက်မှာ သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေး စီစဉ် နေရတော့ တာပါပဲ။
အဲ့ဒီ သတင်းဟာ နှူးကလီးယား ဗုံးပေါက်သလို တမဟုတ်ချင်း ပေါက်ကွဲ ထွက်သွား ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ရွာအိမ်ထောင်စုက (၈၀၀) လောက်လေ။ လူဦးရေနဲ့ မတွက်ကြည့် ပါနဲ့တော့ နှစ်ကျပ်ခွဲက ရွာကြီးပေါ့။ လက်ရှိလျှပ်စစ်မီး ရနေနိုင်တာ (၂၀၀)တောင် မပြည့်သေးဘူး။ ဒါနဲ့ လျှပ်စစ် မရရှိသေးတဲ့ (၅၅၀) ကျော်က လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းမြင့် ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ မီးလင်းရေး ကော်မတီ ဆိုပြီး ဖွဲ့ရော အဲ့လိုဖွဲ့တဲ့ အခါမှာ ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ပေါက်ရောက်အောင် တင်ပြ နိုင်မှုကြောင့် မီး မရရှိသေးသူများ အတွက် ထရန် စဖော်မာ (၁)လုံး ထပ်မံ သုံးစွဲခွင့် ရရှိသွားပါတယ်။
ဒါကို ဦးကောသလ္လက လုံးဝ မကျေနပ်ဘူး မဆိုင်တာတွေနဲ့ တိုက်ခိုက် ပုတ်ခတ်တယ်။ ပါတီ နိုင်ငံရေးမှိုင်း တိုက်အောင် လုပ်တယ်။ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ (ဦးဝင်းမြင့်=ပြည်ခိုင်ဖြိုး) ပေါ့။ ရွာတစ်ရွာ ဆိုတာ ဘုန်းကြီး ပြောသမျှ အမှန်ယူ ရတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးက ရတနာ သုံးပါးထဲမှာ ပါတယ်လေ။ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည် ကြတာပေါ့။ ကျွန်တော့် ယူဆချက် ကတော့ ဘယ်ပါတီဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ဖြစ် မိမိဒေသ ကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက် ပေးရင် လက်ခံ ယုံကြည်မှာပါပဲ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး မို့လို့ NLD မို့လို့ မခွဲခြားဘူး။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အတွက် မဲဆွယ်ပေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမုန်းဆိုတဲ့ နေကာ မျက်မှန်ကို ချွတ်ကြည့်ရင် ပကတိ အတိုင်း မြင်နိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာက အဲ့ဒီမှာ စဖြစ်တော့တာပဲ -
မြို့နယ် လျှပ်စစ်မှူး ဦးမြင့်သူနိုင် နဲ့ အဖွဲ့က ထရန်စဖော်မာ တစ်လုံး ထပ်မံ တပ်ဆင်ဖို့ ရွာကို ရောက်လာ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အခြေအနေမှာ ထီးတော်ရှင် ဘုရားက ထရန်စဖော်မာကို လွတ်ထားတဲ့ ကြိုးတွေကို ခွဲပြီး သွယ်ဖို့ ဓါတ်တိုင်တွေ စိုက်တော့ ဘုန်းဘုန်ုး ဦးကောဿလ္လက ကန့်ကွက်တယ်တဲ့။ ဦးကောသလ္လက သူ့ဒကာ (၁၇)ဦးကိုတော့ မလုပ်ပေး သေးဘူး ဆိုပြီး တိုင်ပြန်တယ်။ မီးလင်းရေး ကော်မတီ ကလည်း မီးမရလို့ ထပ်တိုင်ပြန်ရော ဇာတ်ရှိန် မြင့်လာ ပါပြီ။ ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာ နိုင်တယ်ဆိုတာ ကြိုတင် မှန်းဆလို့ ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမို့ အမှတ် (၂)စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနက ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ) ခေါင်းဆောင်နဲ့ အဖွဲ့က ဇူလိုင် လဦးပိုင်း လောက်မှာ တိုင်စာများကို စစ်ဆေး ပေးဖို့ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်ကို ရောက်လာ ပါလေရော။ ဒီလိုနဲ့ ဘုန်းဘုန်း ဦးကောသလ္လကို လျှပ်စစ်ရုံးကို ကြွရောက်ဖို့ ပင့်ခဲ့ပေမယ့် လုံးဝ လာရောက်ခြင်း မရှိဘူးလို့ သိရ ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၃ မှာ တိုင်း လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ကြူ ဦးဆောင်တဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ လူကြီးများ အဖွဲ့ဟာ လျှပ်စစ်မီး မရသေးသူများ လျှပ်စစ် မီးသွယ်တန်းပေးဖို့ လုပ်တော့ ဦးကောသလ္လက ကန့်ကွက်တယ်။ ထိုနေ့ နေ့လည် လောက်မှာပဲ မြို့နယ် လျှပ်စစ်မှူး ဦးမြင့်သူနိုင်က လျှပ်စစ်မီးကြိုး သွယ်တန်းဖို့ လုပ်ဆောင်တဲ့ အခါမှာ ဦးကောသလ္လ နဲ့ ရွာသူ/ ရွာသား (၁၀)ဦး လောက်က နှောင့်ယှက် ကြတယ် တားမြစ်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဦးကောသလ္လ အပါအ၀င် (၁၀)ဦးကျော်ကို နှစ်ကျပ်ခွဲ အလက မှာ နှောင့်ယှက် ဟန့်တားမှုမျိုး မလုပ်ရန်နဲ့ ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရိုင်ရဲမှူးတို့ ပါတဲ့ အဖွဲ့က ရှင်းလင်းခဲ့ ပါတယ်။ သို့သော် နှောင့်ယှက်မှုများ ကတော့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြင်းခြံခရိုင်လျှပ်စစ်မှူး ဦးကျော်မြင့်က ရဲကို တိုင်ပါလေရော။ တာဝန်ဝတ္တရား နှောင့်ယှက်မှုနဲ့ ဦးကောသလ္လ နဲ့ ရွာသား (၁၀)ဦးကို အမှုဖွင့်တယ်။ တာဝန် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နှောင့်ယှက်သော ဖြစ်ရပ်အား ရိုက်ထားသည့် ဗွီဒီယို မှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းတွေနဲ့ တရားစွဲတယ်။
ရဲ နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး
ဒီလိုနဲ့ တရားခံစာရင်းထဲ ပါနေတဲ့ သူတွေကို ဦးကောသလ္လက ကျောင်းဝင်းထဲ ခေါ်ထား တော့တယ်။ ရဲဝင်ဖမ်းမှာ စိုးတာက တစ်ပိုင်း EPC ကလျှပ်စစ် လာသွယ်ရင် အမြန်ဆုံး တားဆီးလို့ ရအောင်လို့ပေါ့။ နောက်ထပ်လည်း လျှပ်စစ်မီးသွယ်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ နှောင့်ယှက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါအပြင် ထီးတော်ရှင် ထရန်စဖော်မာကနေ မီးယူနေတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၁၄၀)ကျော် လောက်ကို ခေါ်ပြီး ဆန့်ကျင်ရေး စည်းရုံးခဲ့ပါ သေးတယ်။
တိုင်းလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာမှူးနဲ့အဖွဲ့က မီးမရရှိသေး သူများ တိုင်ကြားချက်အရ မီးမရသူများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး မီးရရှိရေး သွယ်တန်းပေးမယ်လို့ အာမခံလိုက် ရတယ်။ ၂၄-၂-၂၀၁၃ မှာ တော့ အကြီးအကျယ် ပြဿနာ တက်လေရော။ အဲ့ဒီနေ့မှာ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မှူး ဦးမြင့်သူနိုင်က လုံခြုံရေး ရဲတွေနဲ့ အတူ လျှပ်စစ်မီးကြိုးထပ် တပ်တယ်။ ဒါနဲ့ ဦးကောသလ္လ ကလည်း ဦးမြင့်သူနိုင်ကို လက်သီးနဲ့ထိုး တယ်တဲ့။ နောက်လျှပ်စစ်က ကားကို သော့ဖြုတ်ယူပြီး မထွက်သွားရင် မီးရှို့မယ်လို့ ငြိမ်းခြောက်သတဲ့။ ဒါနဲ့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ခရိုင်ရဲမှူးတို့က ဦးကောသလ္လကို အကြမ်းမဖက်ဖို့ သွားလျှောက်ပြန်ရော လက်မခံပါဘူး။ ဒါနဲ့ မြိုနယ် သံဃာ့နာယက အတွင်းရေးမှူး ဆရာတော်ကြီး ကို သွားလျှောက်ထားတော့ ဆရာတော်ကြီးက ဦးကောသလ္လကို ဖျောင်းဖျပြောဆိုသော်လည်း မရသဖြင့် ဥပဒေ နှင့်အညီ အရေးယူဖို့ မိန့်လျှောက်ပါလေရော။
ဒီလိုနဲ့ ဦးမြင့်သူနိုင် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားမှုအရ၊ လက်သီးဖြင့် ထိုးမှု၊ ဝေါ်ကီတော်ကီ နဲ့ ကားလုယက်မှု၊ ဝေါ်ကီတော်ကီ ဖြင့် ပေါက်ခွဲမှု တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်သဖြင့် ရဲအဖွဲ့က ကားပြန်သိမ်းရေး၊ တရားခံများ အပ်ပေးဖို့ ဦးကောသလ္လနဲ့ ညှိနှိုင်းရန် အင်အားနဲ့ ၀င်လာ ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ရဲတွေကို လေးဂွနဲ့ဆော်၊ ခဲလုံးနဲ့ တွယ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် အရည်တောင် ပါသေး ဝိုင်းထုကြပါတယ်။ ဦးကောသလ္လ အပါအ၀င် တရားခံတွေကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ရဲသား ၇ ဦး ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက NLD ရုံးကိစ္စပေါ့ ဦးစိုးညွှန့် ဆိုတဲ့လူ ရဲတွေနဲ့ ဦးကောသလ္လ ပြဿနာဖြစ်တော့ ၀င် ဖြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သိပ်မကြာပါဘူး ရဲတွေကို NLD ရုံးထဲကနေ ခဲ/လေးခွ/ပုလင်းတွေနဲ့ ပစ်ပါလေရော။ ဒါလည်း ရဲတွေ NLD ရုံးဖျက်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆန်းတာ တစ်ခုက ရဲတွေ ပြန်မထွက်သွားမချင်း NLD ရုံး ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး ရဲတွေလည်း ပြန်ရော ရွာထဲက ရွာသား (၁၀)ဦးလောက်က NLD ရုံးခြံစည်းရိုးများ၊ ဆိုင်းပုတ်များ၊ ဓါတ်ပုံများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်း ဦးစိုးညွှန့်က ဖျက်ဆီးခဲ့သည်မှာ ရဲမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ဖျက်ဆီးသွားသော ရွာသားများကို အမှုဖွင့် တိုင်တန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်မှု ပြိုကွဲလာရင် တစ်ရွာလုံး အချုပ်ထဲရောက်ကုန်မှာကို တွေးမြင်မိတယ်။
နှစ်ကျပ်ခွဲ NLD ရုံး
ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ ဟာ
(၁) မီးရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လဲ ပြောတယ် တစ်ရွာလုံး မီးရဖို့ကြတော့ ကန့်ကွက်နေတယ်။
(၂) ထီးတော်ရှင်စေတီ အလှူငွေ ဘဏ်စာအုပ်အား အလွဲသုံးစား ပြုတယ်လို့ တရားစွဲခံထား ရတယ်။ ဘယ်ရွာသူ/ ရွာသားမှ ကိုယ့်ဆရာတော်ကို မဟုတ်ဘဲနဲ့ တရားမစွဲရဲပါဘူး။
(၃) တရားတော် အလေးမမူဘဲ ၀ိနည်းတော် နှင့် မလျော်ညီသော မအပ်စပ်သော အားထုတ်မှုများ ပြုခဲ့တယ်။
(၄) လျှပ်စစ် ၀န်ထမ်းတွေကို အေးအေးချမ်းချမ်း မဆွေးနွေးပဲ လက်သီးနဲ့ထိုးတယ်။
(၅) ဒကာ/ ဒကာမတွေကိုလည်း အုပ်စုဖွဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။
ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ရင် ဦးကောသလ္လဆိုတာ သာသနာတော် နဲ့ သံဃာထုကို အစွန်းအထင်း ဖြစ်စေမယ့် ငါးခုံးမ တစ်ကောင် သာဖြစ်နိုင်ကြောင်း အများ ဆင်ခြင်သုံးသပ် နိုင်ရန် ဖော်အပ်ပါသည်။
NLD ပါတီ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်
လတ်တလော ကြားရတဲ့သတင်းအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး နောက် ဆေးရုံမှာတက်ပြီး ပြန်ဆင်းလာတဲ့ တရားခံ (၃)ဦးကို ရဲက ဥပဒေနဲ့အညီ တရားစွဲတင်နိုင်ဖို့ ဖမ်းဆီးရန် ဆောင်ရွက်နေတုန်း NLD ပါတီက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ NLD ပါတီဝင်များ ပါတီဝတ်စုံဖြင့် NLD အလံ ထောင်ထားတဲ့ ကားပေါ်ကို တရားခံ တွေ ခေါ်ဆောင် သွားကြောင်း ထပ်ကြားရပြန်ပါတယ်။
တရားဝင်ပါတီ တစ်ခု အနေနှင့် တည်ဆဲ ဥပဒေကို လိုက်နာရမယ့် အစား ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ တွေကို လိုက်ပြီး အကာအကွယ် ပေးနေတဲ့ (တနည်းအားဖြင့် တရားဝင် ပါတီဆိုတာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့) အနေအထားတွေ ဖြစ်နေတယ်။
ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ဆိုတာ မေ့နေပါသလား ?
ဥပဒေ အထက် မှာများ မိမိရောက်နေတယ်လို့ ခံစားမိနေပါသလား? ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်စားသင့် ပါတယ်။
မှန်တယ်/ မမှန်ဘူး တရားရုံးက စိစစ် ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီး ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် က တရားသူကြီးထက် ပိုပြီး အာဏာရ သွားတာလား၊ ဒါဟာ ပါတီ တစ်ခုအနေနဲ့ မလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ပါ။
myan pyi thar FB မှ
NLD ပါတီဝင်တစ်ဦးက လ၀က ၏ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို ဖျက်သိမ...
၂၀၁၅ မှာ ရွေရောင်လွှမ်းတဲ့ မြန်မာပြည်ဖြစ်ဖို့ ပြည်သ...
ပြည်မြို့ NLD နှစ်ခြမ်းကွဲကာ အချင်းချင်းဆန္ဒပြမှု တရ...
NLD ဈေးရောင်း ရန်ပုံငွေ ရှာပွဲ ပြည်သူများ မကျေနပ်...
NLD ဗဟိုအဆင့် အကွဲအပြဲ အစ ကိုယ်စားလှယ် (၄) ဦးအား ...